28.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– यस बेहदको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ , यो अनादि नाटक हो , यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन।”
बुद्धिमान्, दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्?
मूलवतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि-मध्य-अन्त्यको जुन गहन रहस्य छ, त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन्– यस बेहदको नाटकमा आत्मारूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पार्ट खेलिरहेको छ, उसले सत्ययुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पार्ट खेल्नु पर्छ। कुनै पनि कलाकार बीचैमा फर्केर जान सक्दैन।
यो गीत बच्चाहरूले सुन्यौ। अब यसमा कुनै अक्षर सही पनि छन् भने गलत पनि छन्। सुखमा त स्मरण गरिदैन। दु:ख पनि आउनु छ अवश्य। दु:ख भएपछि नै त सुख दिनको लागि बाबालाई आउनु पर्छ। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ, अहिले हामीले सुखधामको लागि पढिरहेका छौं। शान्तिधाम र सुखधाम। पहिला मुक्ति फेरि हुन्छ जीवनमुक्ति। शान्तिधाम घर हो, त्यहाँ कुनै पार्ट खेलिदैन। कलाकारहरू घरमा जान्छन्, त्यहाँ कुनै पार्ट खेल्दैनन्। पार्ट स्टेजमा खेलिन्छ। यो पनि स्टेज हो। जसरी हदको नाटक हुन्छ त्यसैगरी यो बेहदको नाटक हो। यसको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। वास्तवमा यी यात्रा अथवा युद्ध अक्षर केवल बुझाउनको लागि काममा ल्याइन्छ। बाँकी यसमा युद्ध आदि केही छँदै छैन। यात्रा शब्द पनि छ। बाँकी हो त याद। याद गर्दै गर्दै पावन बन्छौ। यो यात्रा पूरा पनि यहाँ नै हुन्छ। कहीं जानु पर्दैन। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, पावन बनेर आफ्नो घर जानु छ। अपवित्र त जान सक्दैन। आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। म आत्मामा सारा चक्रको पार्ट छ। अब पार्ट पूरा भएको छ। बाबाले धेरै सहज राय दिनुहुन्छ– मलाई याद गर। बाँकी बस्नु त यहाँ नै छ। कहीं जाँदैनौ। बाबा आएर भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। युद्ध कुनै छँदै छैन। आफूलाई तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनाउनु छ। मायामाथि विजय पाउनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– ८४ को चक्र पूरा हुनु छ, भारतवर्ष सतोप्रधान थियो। त्यहाँ अवश्य मनुष्य नै हुन्छन्। जमीन कहाँ बद्लिन्छ र। अहिले तिमीले जानेका छौ– हामी सतोप्रधान थियौं फेरि तमोप्रधान बन्यौं। अब फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। मनुष्यहरूले पुकार्छन् पनि, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कसरी आउनु हुन्छ, केही पनि जानेका छैनन्। अहिले बाबाले तिमीलाई समझदार बनाउनु भएको छ। तिमीले कति उच्च पद पाउँछौ। त्यहाँका गरिब पनि धेरै उच्च हुन्छन्, यहाँका धनवानहरू भन्दा। जतिसुकै ठूला-ठूला राजाहरू थिए, धन धेरै थियो तर हुन् त विकारी नै। यी भन्दा त त्यहाँका साधारण प्रजा पनि धेरै उच्च बन्छन्। बाबा फरक बताउनु हुन्छ। रावणको छायाँ परेपछि पतित बन्छन्। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि आफूलाई पतित भनेर शिर झुकाउँछन्। बाबा यहाँ आएर तुरुन्त माथि चढाइदिनुहुन्छ। सेकेण्डको कुरा हो। अहिले बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ, ज्ञानको। तिमी बच्चाहरू दूरदर्शी बन्छौ। माथि मूलवतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको चक्र तिम्रो बुद्धिमा याद छ। जस्तै हदको ड्रामा देखेर फेरि आएर सुनाउँछन् नि, के-के देखेँ? बुद्धिमा भरिएको हुन्छ, जुन वर्णन गर्छन्। आत्मामा भरेर आउँछन् आएर फेरि बाँड्छन्। यहाँ छ फेरि बेहदको कुरा। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यस बेहद ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य रहनु पर्छ, जुन दोहोरिइरहन्छ। त्यस हदको नाटकमा त एउटा कलाकार निस्किन्छ भने फेरि बदलामा अर्को आउन सक्छ। कोही बिरामी भयो भने उसलाई बदलेर फेरि अर्को थपिदिन्छन्। यो त चैतन्य ड्रामा हो, यसमा अलिकति पनि हेरफेर हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्मा हौं। यो शरीररूपी चोला हो, जुन धारण गरेर हामी बहुरूपी पार्ट खेल्छौं। नाम, रूप, देश, अनुहार बद्लिन्छन्। कलाकारहरूलाई आफ्नो पार्टको बारेमा त थाहा हुन्छ नि। बाबाले बच्चाहरूलाई यो चक्रको रहस्य त सम्झाइरहनुहुन्छ। सत्ययुगदेखि लिएर कलियुगसम्म आउँछन्, घुम्छन् फेरि सुरुबाट पार्ट खेल्छन्। यसको विस्तार सम्झाउनमा समय लाग्छ। बीजमा ज्ञान हुन्छ फेरि पनि बुझाउन त समय लाग्छ नि। तिम्रो बुद्धिमा सारा बीज र वृक्षको रहस्य छ, त्यो पनि जो राम्रो बुद्धिमान् छ, उसैले सम्झन्छ– यसको बीज माथि छ, यसको उत्पत्ति, पालना र संहार कसरी हुन्छ। त्यसैले त्रिमूर्ति पनि देखाइएको छ। यो जुन ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ, अरू कुनै पनि मनुष्यले दिन सक्दैन। जब यहाँ आउँछौ तब थाहा हुन्छ। त्यसैले तिमीले सबैलाई भन्छौ यहाँ आएर बुझ्नुहोस्। कोही-कोही धेरै कट्टर छन् भने भन्छन्– हामीलाई केही सुन्नु छैन। कसैले त फेरि सुन्छन् पनि, कसैले लिटरेचर लिन्छन्, कसैले लिदैनन्। तिम्रो बुद्धि अहिले कति विशाल, दूरदर्शी भएको छ। तीन लोकलाई तिमीले जानेका छौ, मूलवतन जसलाई निराकारी दुनियाँ भनिन्छ। बाँकी सूक्ष्मवतनमा केही पनि छँदै छैन। कनेक्शन सारा मूलवतन र स्थूलवतनसँग छ। सूक्ष्मवतन त थोरै समयको लागि हो। बाँकी आत्माहरू सबै माथिबाट यहाँ आउँछन् पार्ट खेल्न। यो वृक्ष सबै धर्मको नम्बरवार छ। यो हो मनुष्यहरूको वृक्ष र बिल्कुल एक्युरेट छ। केही पनि अघि-पछि हुन सक्दैन। न आत्माहरू अरू कुनै स्थानमा बस्न सक्छन्। आत्माहरू ब्रह्म महतत्त्वमा स्थित हुन्छन्, जसरी ताराहरू आकाशमा स्थित छन्। यी ताराहरू त टाढाबाट साना-साना देखिन्छन्। छन् त ठूला। तर आत्मा त न सानो-ठूलो हुन्छ, न विनाश हुन्छ। तिमी गोल्डेन एजमा जान्छौ फेरि आइरन एजमा आउँछौ। बच्चाहरूले जानेका छन्– हामी गोल्डेन एजमा थियौं, अब आइरन एजमा आइपुगेका छौं। कुनै मूल्य बाँकी छैन। छन त मायाको चमक कति छ तर यो हो रावणको गोल्डेन एज, त्यो हो ईश्वरीय गोल्डेन एज।
मनुष्यले भनिरहन्छन्– ६-७ वर्षमा यति अनाज हुन्छ, कुरै नसोध। हेर, उनीहरूको योजना के छ र तिमी बच्चाहरूको योजना के छ? बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो योजना हो पुरानोलाई नयाँ बनाउने। तिम्रो एउटै योजना छ। जानेका छौ– बाबाको श्रीमतद्वारा हामीले आफ्नो वर्सा लिइरहेका छौं। बाबा मार्ग बताउनु हुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ, यादमा रहने मत दिनुहुन्छ। मत शब्द त छ नि। संस्कृत शब्द त बाबाले बोल्नुहुन्न। बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाइरहनुहुन्छ। भाषाहरू त धेरै छन् नि। दोभाषे पनि हुन्छन्, जसले सुनेर फेरि सुनाउँछन्। हिन्दी र इंगलिश त धेरैले जानेका छन्। पढ्छन्। बाँकी माताहरू जो घरमा रहन्छन् उनले त्यति पढ्दैनन्। आजकल बेलायतमा अंग्रेजी सिक्छन्, त्यसैले फेरि यहाँ आउँदा पनि अंग्रेजी बोलिरहन्छन्। आफ्नो भाषा बोल्नै सक्दैनन्। घरमा आउँछन् अनि आमासँग अंग्रेजीमा कुरा गर्न लाग्छन्। उनी बिचरी अलमलमा पर्छिन्, मैले के जानौं अंग्रेजी। फेरि उनले टुटी-फुटी आफ्नो भाषा सिक्नु पर्ने हुन्छ। सत्ययुगमा त एक राज्य, एक भाषा थियो, जो अब फेरि स्थापना गरिहेका छौं। हरेक ५ हजार वर्षपछि यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ सो बुद्धिमा रहनु पर्छ। अब एक बाबाको नै यादमा रहनु छ। यहाँ तिमीलाई राम्रो फुर्सत हुन्छ। सबेरै स्नान आदि गरेर बाहिर घुम्दा-फिर्दा धेरै मजा आउँछ, भित्र यही याद रहोस् हामी सबै कलाकार हौं। यो पनि अहिले स्मृतिमा आएको छ। बाबाले हामीलाई ८४ को चक्रको रहस्य बताउनु भएको छ। हामी सतोप्रधान थियौं, यो धेरै खुशीको कुरा हो। मानिसहरू घुम्छन्-फिर्छन्, उनीहरूको केही पनि कमाई हुँदैन। तिमीले त धेरै कमाई गर्छौ। बुद्धिमा चक्र पनि याद रहोस् फेरि बाबालाई पनि याद गरिराख। बाबाले धेरै राम्रा-राम्रा कमाई गर्ने युक्तिहरू बताउनु हुन्छ। जो बच्चाहरूले ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्दैनन् उनको बुद्धिमा मायाले खिटपिट गर्छ। उनलाई नै मायाले हैरान पार्छ। मनमा यो विचार गर हामीले यो चक्र कसरी लगायौं। सत्ययुगमा यति जन्म लियौं फेरि तल उत्रिदै आयौं। अब फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ– मलाई याद गर्यौ भने सतोप्रधान बन्छौ। चल्दा-फिर्दा बुद्धिमा याद रहोस् तब मायाको खिटपिट समाप्त हुन्छ। तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। स्त्री-पुरुष साथै घुम्न जान्छौ । तर हरेकले आफैं मेहनत गर्नु छ, आफ्नो उच्च पद पाउन। एक्लै जाँदा त धेरै मजा हुन्छ। आफ्नै धुनमा रहन्छौ। अर्को साथमा छ भने बुद्धि यता-उता जान्छ। छ धेरै सहज, बगैंचा आदि त सबै ठाउँमा छन्, इन्जीनियर छ भने उसको यही चिन्तन चलिरहन्छ– यहाँ पुल बनाउनु छ, यो गर्नु छ। बुद्धिमा योजना आउँछ। तिमी पनि घरमा बस फेरि पनि बुद्धि बाबातिर लागिरहोस्। यो बानी बनायौ भने तिम्रो भित्र यही चिन्तन चलिरहन्छ। पढ्नु पनि छ, धन्दा आदि पनि गर्नु छ। वृद्ध, जवान, बच्चा आदि सबैलाई पावन बन्नु छ। आत्मालाई हक छ, बाबाबाट वर्सा लिने। बच्चाहरूलाई पनि सानैमा यो बीज पर्यो भने धेरै राम्रो। आध्यात्मिक विद्या अरू कसैले सिकाउन सक्दैन।
तिम्रो यो जुन आध्यात्मिक विद्या छ, यो तिमीलाई बाबा नै आएर पढाउनु हुन्छ। ती विद्यालयहरूमा मिल्छ लौकिक विद्या। अनि त्यो हो शास्त्रहरूको विद्या। यो फेरि हो रूहानी विद्या, जुन तिमीलाई भगवानले सिकाउनु हुन्छ। यसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यसलाई भनिन्छ नै आध्यात्मिक ज्ञान, जुन परमात्मा नै आएर पढाउनु हुन्छ, यसको अरू कुनै नाम राख्न सकिँदैन। यो त स्वयं बाबा आएर पढाउनु हुन्छ। भगवानुवाच छ नि। भगवान एकै पटक यस समय आएर सम्झाउनु हुन्छ, यसलाई रूहानी ज्ञान भनिन्छ। त्यो शास्त्रहरूको विद्या अलग हो। तिमीलाई थाहा छ– ज्ञान पहिलो छ लौकिक कलेज आदिको, दोस्रो छ आध्यात्मिक शास्त्रहरूको विद्या तेस्रो छ यो रूहानी ज्ञान। ती जति नै ठूला-ठूला डक्टर अफ फिलोसफी बनून्, तर उनीहरूको पासमा पनि शास्त्रहरूको कुरा छ। तिम्रो यो ज्ञान बिल्कुल अलग हो। यो आध्यात्मिक ज्ञान जुन आध्यात्मिक पिता, सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पढाउनु हुन्छ। उहाँको महिमा छ– शान्ति, सुखका सागर....। कृष्णको महिमा बिल्कुल अलग छ, गुण-अवगुण मनुष्यमा हुन्छन्, जसको बारेमा भनिरहन्छन्। बाबाको महिमालाई पनि यथार्थ रीतिले तिमीले जानेका छौ। उनीहरूले त केवल सुगाले जस्तै गाउँछन्, अर्थ केही जानेका छैनन्। त्यसैले बच्चाहरूलाई बाबा राय दिनुहुन्छ आफ्नो उन्नति कसरी गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ गरिरहन्छौ भने फेरि पक्का हुँदै जान्छौ फेरि अफिसमा काम गर्दा पनि यो स्मृति आउँछ, ईश्वरको स्मृति रहन्छ। मायाको स्मृति त आधाकल्प चल्यो, अहिले बाबा बसेर यथार्थ रीतिले सम्झाउनु हुन्छ। आफूलाई हेर– म के थिएँ, अब के बनेको छु! फेरि हामीलाई बाबाले यस्तो देवता बनाउनु हुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूले नै नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। पहिला-पहिला भारतवर्ष नै थियो। यहाँ नै बाबा पनि आउनु हुन्छ पार्ट खेल्न। तिमी पनि आदि सनातन देवी-देवता धर्मका हौ नि। तिमी पवित्र बन्नु छ, नत्र पछाडिमा आउने छौ, फेरि के सुख पाउँछौ? भक्ति धेरै गरेका छैनन् भने आउँदैनन्। बुझिन्छ, यो यति चढ्दैन। बुझ्न त सकिन्छ नि। धेरै मेहनत गर्छन् फेरि पनि कुनै बिरलै निस्किन्छन् तर थाक्नु हुँदैन। मेहनत त गर्नु पर्छ। मेहनत बिना कहाँ केही मिल्छ! प्रजा त बनिरहन्छन्।
बाबाले बच्चाहरूलाई उन्नतिको लागि युक्ति बताउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने सबेरै-सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा गएर चक्कर लगाऊ वा बस। स्वास्थ्यको लागि पैदल हिँड्नु पनि राम्रो हो। बाबाको पनि याद रहन्छ र ड्रामाको रहस्य पनि बुद्धिमा रहन्छ, कति कमाई हुन्छ। यो हो सत्य कमाई, त्यो कमाई पूरा भयो फेरि यस कमाईको चिन्तन गर। मुश्किल केही पनि छैन। बाबाले देखेका छन्– सारा जीवन कहानी लेख्छन्, आज यति बजे उठेँ, फेरि यो गरेँ.... सम्झन्छन् पछि पढेर सिक्छन्। ठूला-ठूला मानिसहरूको जीवनी पढ्छन् नि। बच्चाहरूको लागि लेख्छन् फेरि बच्चाहरू पनि घरमा यस्तो राम्रो स्वभावका हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गरेर सतोप्रधान बन्नु छ। सतोप्रधान दुनियाँको फेरि राज्य लिनु छ। तिमीले जानेका छौ– कल्प-कल्प हामीले राज्य लिन्छौं र फेरि गुमाउँछौं। तिम्रो बुद्धिमा यो सबै छ। यो हो नयाँ दुनियाँ, नयाँ धर्मको लागि नयाँ ज्ञान, त्यसैले प्यारा बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनु हुन्छ– छिटो-छिटो पुरुषार्थ गर। शरीरको भरोसा कहाँ छ र! आजकल मृत्यु धेरै सस्तो (इजी) भएको छ। त्यहाँ अमरलोकमा यस्तो मृत्यु कहिल्यै हुँदैन, यहाँ त बसी-बसी कसरी मर्छन्। त्यसैले आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख। जम्मा गरिराख। अच्छा!
१) बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। जब समय मिल्छ, एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नु पर्छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ।
२) दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। सबै कलाकारहरूको पार्टलाई साक्षी भएर हेर्नु छ।
मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव
जसरी भक्तिमार्गमा मूर्ति बनाएर पूजा आदि गर्छन्, फेरि त्यसलाई डुबाइदिन्छन्, त्यसैले तिमी त्यसलाई गुडियाको पूजा भन्छौ। यसैगरी तिम्रो सम्मुख पनि जब कुनै निर्जीव, असार कुराहरू ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि आउँछ अनि तिमी त्यो कुरालाई विस्तार गरेर अनुभव गर्छौ वा गराउँछौ– यही सत्य हो, यो पनि त्यसमा प्राण भर्नु जस्तै हो। फेरि ती कुरालाई ज्ञानसागर बाबाको यादबाट, बितेकोलाई बिती गरेर, स्व उन्नतिको लहरहरूमा डुबाउँछौ पनि तर यसमा पनि समय त व्यर्थ जान्छ नि। त्यसैले पहिला नै मास्टर ज्ञान सागर बनेर स्मृति सो समर्थी भवको वरदानबाट यी गुडियाहरूको खेललाई समाप्त गर।
जो समयमा सहयोगी बन्छन् उनीहरूलाई एकको पद्मगुणा फल मिल्छ।